Bitcoin Debit Card Imibuzo Evame Ukubuzwa - Bitcoin Credit Card Ukuqhathanisa 2018
Uyini bitcoin debit card?
Ikhadi bitcoin lasebhange kuyinto Visa noma Mastercard ongazisebenzisa ukuthenga izimpahla kanye nezinsizakalo ezivela inthanethi kanye okungaxhunyiwe izitolo noma imali ATM. Ngesikhathi esifanayo it is ngqo elisekelwa izimali bitcoin. debit card Bitcoin wenze ukufinyelela okulula ukuchitha cryptocurrency izimali kuphi emhlabeni.
Yiziphi izinhlobo debit card bitcoin ukhona?
I plastic bitcoin lasebhange libukeka i Visa abavamile noma Mastercard ongazisebenzisa ngendlela efanayo. Isengezo bitcoin lasebhange ikhishwa ku-inthanethi nge imininingwane efanayo njengoba lasebhange ejwayelekile. Igama wekhadi, Usuku okuphela futhi CVC / CVV amakhodi zinikezwa phezu oda, kodwa akukho ukukhiqizwa phsyical okwenza kube lula futhi ngokushesha ukufinyelela izimali.
Ngingakusebenzisa kanjani a bitcoin debit card?
Ungasebenzisa ikhadi bitcoin lasebhange njenganoma iyiphi lasebhange prefunded. Ungakwazi ukuchitha ibhalansi ikhadi ukuthenga izimpahla uthole nezinkonzo ezitolo zendawo noma ezitolo inthanethi. Uma une plastic bitcoin debit card, ungakwazi ukuhoxisa ukheshi kusuka ATM. Ungasebenzisa futhi i-debit card yakho bitcoin ukwenza ukuthenga ekhaya nasemaveni angaphandle.
Yiziphi zezimali Angikwazi ukusebenzisa ikhadi bitcoin lasebhange nge?
Bitcoin debit card ophethe izimali etholakala Fiat zezimali eceleni bitcoin. I zezimali ezithandwa kakhulu USD, EUR futhi GBP. Lwemali ongamiswa lwemali oluzenzakalelayo exhumene lemali bitcoin debit card, ngakho ukuthengiselana olwenziwa ngekhadi kuvetwa ngalolo hlobo lwemali. Ambalwa abahlinzeki ukuvula bitcoin lasebhange izimakethe ikhadi kwizimali eminye kanye. phakathi kwabanye, abahlinzeki inikeza debit card bitcoin okuzenzakalelayo lwemali e RUB, CNY, JPY, KRW, AUD futhi CHF. Abanye abanikezeli Ubuye ukhetho ukukhokhela ikhadi altcoins kanye eceleni bitcoin.
Ngingayithola kanjani oda bitcoin debit card?
Ukuze abe bitcoin debit card, kufanele ubhalise kwelinye platform abahlinzeki '. Inqubo yokubhalisa kuhlanganisa nokunikeza imininingwane siqu wekhadi, njenge gama, usuku lokuzalwa kanye nendawo yokuhlala. Ukwaziswa okunikezwe kumele iqinisekiswe nesithombe se-ID kanye nobufakazi yokuhlala. Lokhu kungaba bill eliqukethe ikheli caldholder. Ngemva kokufaka i-oda bese ukhetha indlela yokuhamba amakhadi plastic ezilethwa ekhaya lakho. Esimeni lapho ukhetha ikhadi virtual, imininingwane ikhadi zikhishwa lakho le-imeyili. Uma ungafuni ngolwazi oluyimfihlo, ungakwazi oda bitcoin lasebhange engaziwa ngaphandle kokuqinisekisa.
Ngingaba nayo ikhadi bitcoin lasebhange ngaphandle kokuqinisekisa?
Yebo. debit card engaziwa bitcoin ayatholakala ambalwa abahlinzeki emakethe. Uma ungafuni ukuya ngenqubo yokuqinisekisa yokunikeza isithombe se-ID kanye nobufakazi yokuhlala, ungakhetha i engaziwa bitcoin debit card. Kulokhu Nokho-ke Kuyaphawuleka ukuthi imikhawulo esebenzayo kubasebenzisi ezingaqinisekisiwe njalo aphansi uma kuqhathaniswa abasebenzisi eliqinisekisiwe. Ngakho-ke kuphela okulinganiselwe izimali ingasetshenziswa ne engaziwa bitcoin debit card esenana kuphela ukuhlinzeka igama ukuboniswa ekhadini.
Kumthatha ukuthola bitcoin debit card isikhathi esingakanani?
I amakhadi epulasitiki bitcoin lasebhange akhishwa Visa noma Mastercard futhi kuthatha 2-3 amasonto ukuzithola. Ubungako besikhathi ukuze uthole khadi kuye ibanga phakathi umhlinzeki ikhadi kanye wekhadi. Ukuze uthole kwendibilishi kwezidingo express kungenziwa kukhethwe ngaso sonke we abahlinzeki. Kulokhu amakhadi zilethwa ngaphakathi 2-5 izinsuku zebhizinisi kanye izinkonzo ezenziwa DHL kanye inombolo yokulandelela.
Ngingayithola kanjani phezulu ikhadi bitcoin lasebhange?
Ungakwazi phezulu up ikhadi bitcoin lasebhange ezinye izindlela eziningana kuka bitcoin. Ungasebenzisa yasebhange nge-wire, credit noma debit card kanye nehlukile abahlinzeki yokukhokha Neteller futhi Skrill. Ezimweni eziningi Nokho PayPal akuyona phakathi indlela yokukhokha wamukela ngenxa nemigomo yalo nemibandela.
Ngingayithola kanjani imali kusuka bitcoin debit card?
Ungakwazi ukuhoxisa imali kusuka bitcoin debit card izindlela ezifanayo njengoba uke ukulayishwa akhawunti. Ungathumela bitcoins kwelinye ikheli. Ungase futhi ukuhoxisa izimali ku-akhawunti yasebhange noma umhlinzeki yokukhokha ehlukile, ezifana Skrill noma Neteller. Ezimweni eziningi Nokho PayPal akuyona phakathi wamukela ukuhoxiswa indlela debit card bitcoin.
Ngingaba imali ATM nge debit card bitcoin?
Yebo. Ungakwazi imali ATM emhlabeni wonke usebenzisa plastic bitcoin debit card.
Kungakanani izindleko bitcoin debit card?
Amanani entengo amakhadi bitcoin lasebhange kuthiwa obuhlukahlukene kabezemfundo. I esisodwa Ukukhishwa izindleko ngepulasitiki bitcoin lasebhange esiphakathi 5-25 USD. Izindleko Ukukhishwa virtual bitcoin lasebhange kakhulu ukubuyeka, ungathola ngisho mahhala ezinye izindawo. Ngaseceleni esisodwa ukukhiqizwa izindleko ikhadi, ngenyanga Imali akhawunti yesondlo iyakhokhiswa esikhathini inani 1 USD ngenyanga.
Yiziphi izindleko kuthengiselana ephathelene ne-bitcoin debit card?
Izindleko kuthengiselana amakhadi bitcoin lasebhange kuthiwa obuhlukahlukene kabanzi, amakhadi ezibizayo ungaba kufakelwa ezincane. Ilayisha ikhadi ngokuvamile mahhala, kuyilapho ukuhoxa kuthiwa ehlehlela esekelwe-uhlobo lokuzijabulisa olukhethayo. Uhlelo POS futhi inthanethi uthenge zingabekwa icala imali esinqunyiwe noma amaphesenti prorata. ATM Ukuzihoxisa basolwa phakathi 1.5-2.5% ngakunye, Ukuzihoxisa ngamazwe okubiza kakhulu. Kukhona futhi Imali lwemali wokuhumusha likhokhelwa uma lwemali ezizenzakalelayo ayifani lwemali yokuhweba.
Yiziphi imikhawulo a bitcoin debit card?
Kwezinye izimo kukhona inani eliphezulu Isikhwama ungakwazi ukulayisha a debit card bitcoin. Lokhu nemithelela inani lemali ungachitha ngekhadi futhi inani cash ungakwazi bahoxe ATM. abasebenzisi eliqinisekisiwe kungase kudingeke imikhawulo ephakeme futhi abanye abahlinzeki inikeza angenamkhawulo bitcoin lasebhange kubasebenzisi obhalisiwe. I topup esaphila anqunyelwe emhlabeni 2000 USD kubasebenzisi engaziwa.
Yiziphi ATM Imali ephathelene ne-bitcoin debit card?
Bitcoin lasebhange abahlinzeki umangalela imali uma ukhipha imali ATM. Le mali lingashajwa kuthengiselana noma prorata ngayinye. The ezifuywayo ATM Ukuzihoxisa ngokuvamile abiza emhlabeni 1.5%, kuyilapho ngamazwe ATM Ukuzihoxisa basolwa ngesikhathi 2.5%.
Kuyini imali lwemali wokuhumusha elihlobene ne-debit bitcoin ikhadi ukuthengiselana?
Imali lwemali wokuhumusha likhokhelwa uma lwemali ezizenzakalelayo ku-akhawunti ephathelene ikhadi bitcoin debit is ezahlukene kuqhathaniswa lwemali kuthengiselana. Kulokhu ezihleliwe 3% Imali lwemali wokuhumusha likhokhelwa ngu yonke abahlinzeki emakethe.